St. Eustatius - Saba - Sint Maarten doon cusub oo jasiiradda dhexdeeda ah ayaa la bilaabay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » St. Eustatius Breaking News » St. Eustatius-Saba-Sint Maarten doon cusub oo jasiiradda dhexdeeda ah ayaa la bilaabay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • News • Dadka • Sint Maarten Breaking News • St. Eustatius Breaking News • St. Maarten Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
St. Eustatius-Saba-Sint Maarten doon cusub oo jasiiradda dhexdeeda ah ayaa la bilaabay
M/V Makana ee Blues iyo Blues Ltd. kana yimid Anguilla.
Makana Ferry waxay bilaabaysaa safarada jasiiradaha u dhexeeya Statia, Saba iyo Sint Maarten 1da Noofambar, 2021.
Blues iyo Blues Ltd ee Anguilla waxay ku guuleysteen qandaraaska isku xirka badda ee jasiiradaha ee M/V Makana.
Makana waa 72 inji oo saber catamaran ah oo degdeg ah, oo awood u leh inay qaado 150 rakaab ah oo ka gudubta laba dabaq.
Diyaargarowga koox jasiirad ah ayaa si buuxda u socota si ay u awoodaan inay la kulmaan taariikhda bilawga.
Blues iyo Blues Ltd. ee Anguilla ayaa loo qorsheeyay inay ku bilaabaan safarada jasiiradaha u dhexeeya Statia, Saba iyo Sint Maarten 1da Noofambar, 2021. Diyaargarowga koox jasiirad ah ayaa si buuxda u socota si ay u awoodaan inay la kulmaan taariikhdan. Macluumaadka ku saabsan qiimayaasha iyo macluumaadka jadwalka saxda ah ayaa dhowaan la socon doona.
Blues iyo Blues Ltd ee Anguilla waxay ku guuleysteen qandaraaska isku xirka badda ee jasiiradaha ee M/V Makana. Makana waa 72 inji oo saber catamaran ah oo degdeg ah, oo awood u leh inay qaado 150 rakaab ah oo ka gudubta laba dabaq. Waxaa jira sagxad hoose, sagxad qorraxda sare (furan) iyo aagga dabaqadda sare ee ganacsiga. Dabaqa hoose iyo aagga sare labaduba waxay leeyihiin hawo qaboojiye waxayna ku rakiban yihiin laba musqulood iyo baar.
Makana waxay bixin doontaa boorsooyin iyo xamuul fara badan. Catamaran wuxuu si raaxo leh ugu safri doonaa xawaare hawlgal oo ah 23 garaac oo leh xawaare ugu sarreeya 31knots. Safarradu waxay ahaan doonaan qiyaastii 45 daqiiqo min Saba ilaa Statia, 75 daqiiqo laga bilaabo Saba ilaa St. Maarten iyo 85 daqiiqo laga bilaabo Statia ilaa St. Maarten. Sababtoo ah xayiraadaha COVID-19 ee St. Kitts, dariiqa jasiiraddan weli lama qorsheyn karo ilaa ogeysiis dambe.
Makana waa erayga Hawaiian ee "Gift". Blues & Blues Ltd. ayaa ku soo dhoweysay markabka maraakiibteeda dhowaan. Rakaabku waxay filan karaan adeeg saaxiibtinimo oo la isku halleyn karo oo lagu dhammaystiray WiFi -ga dusha sare iyo adeegyada macaamiisha internetka. Makana waxaa la dejin doonaa Statia ama Saba. Deganeyaasha waxaa lagu dhiirri -gelinayaa inay codsadaan jagooyin bannaan oo ah shaqaale.
Samuel Connor, oo ah milkiilaha Blues and Blues Ltd., ayaa yiri: “Waxaan nahay ganacsi qoys. Waxaan si xoog leh u aaminsanahay inaan gacan ka geysan karno horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha jasiiradaha iyada oo loo marayo isku xirnaanta badda ee dhexdooda oo ay ku jiraan St. Barth, Anguilla iyo Nevis ”.